Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland oo dib ugu noqday Garowe xili la filayo in ay dib u bilawdaan hawlaha kalfadhiga 43aad – Kalfadhi
Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland Cabdixakiin Maxmed Axmed Dhoobo-daareed iyo qaar ka mid ah baarlamanka oo la socday ayaa maanta dib ugu soo noqday Garowe, kadib in ka badan laba toddobaad oo gudoomiyaha iyo wefdigiisu ay dibedda ku maqnaayeen.
Shir jaraa’id ayuu gudoomiyuhu ku sheegay in safarkiisa Djibuuti iyo kan Muqdisho ay lahaayeen ujeedooyin shaqo oo uu golaha ugu maqnaa. Wuxuuse xusay in ay jireen hawlo isaga u gaar ah oo uu safarkiisu qayb ka ahaa.
Gudoomiyaha ayaa dib u soo noqday xili la filayo inuu beri dib u furmo fadhiga golaha ee kalfadhiga 43aad oo lagaga shaqayn doono miisaaniyadda dowladda.
Inta badan Wakiillada ayaa gudoomiyaha ku soo dhoweeyay garoonka Gen. Abshir
Xildhibaan Idiris "Aqalka Sare Waxa uu gabay Shaqadii loo Idmaday"